Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warisay 15 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-1 | KWIT
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warisay 15 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-1
By Halima Osman • Feb 24, 2021
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warisay 15 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 dhibaatooyinka. In kabadan 700 oo tijaabo ah 24-saacadood, oo ay kujiraan 26 inbadan oo katirsan Degmada Woodbury. Heerka wax ku oolka ah ee Degmada Woodbury wuxuu kordhay qiyaastii 1/3 ama dhibic boqolkiiba heerka hadda ee 5.4% ka badan 14-maalmood.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota waxay ku qiyaaseen 22% dadweynaha gobolka inay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID-19. Heerkan kuma jiraan tallaalada barnaamijka farmasiga ee dawladda dhexe ama ay maamusho Adeegyada Caafimaadka Hindida. Intii lagu guda jiray shir jaraa'id maanta, mas'uuliyiintu waxay yiraahdeen inay xamili karaan xitaa tallaallo badan, laakiin sahaydu ma joogaan.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Winnebago waxay soo saartay cusbooneysiin maanta ah COVID-19 oo muujineysa qabiilka in ka badan 2000 tallaalay ilaa hadda. Taasi waxay u dhigantaa ilaa 40% bulshada qaata ugu yaraan hal qiyaas. Hadafku waa 80%. Tirooyinkan ayaa aad uga sarreeya awood kasta oo kale oo ka jira aagga Siouxland.
Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay joojin doontaa maalgalinta akadeemiyadeeda cusub ee wax barashada waxayna xooga saari doontaa waxbarashada shaqsiga ah.
Habeenkii Talaadada, guddiga iskuulka wuxuu ka hadlay sida loo isticmaalo ilaa 20 milyan oo doolar oo ah lacagta federaalka si loo horumariyo waxbarashada ardayda. Falanqeyn badan iyo fikradaha muwaadin kadib, gudiga wuxuu go aansaday in lacagaha gargaarka degdega ah ee musiibada la xiriira lagu bixiyo si loo caawiyo ardayda halganka taa badalkeeda
Lacagta federaalka waxaa loo isticmaali doonaa barnaamijyada wax kabashada ee wax kabashada, umeerin, dugsiga xagaaga, ama baahiyaha kale ee waxbarasho. Degmadu waxay heshay $ 2.8 milyan oo maaliyad federaal ah, xagaagii lasoo dhaafay waxayna heli doontaa $ 17.3 milyan oo dheeri ah wajiga kale sanadkan.
Tirada dadka ku nool Iowa ee u dhintay dhibaatooyinka cudurka cusub ee coronavirus ayaa gaadhay 5,40
By Halima Osman • Feb 23, 2021
Tirada dadka ku nool Iowa ee u dhintay dhibaatooyinka cudurka cusub ee coronavirus ayaa gaadhay 5,400 maalintii talaadada. Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay ku dartay 26 dhimasho dheeraad ah 24-kii saacadood ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan mid kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury, 211 oo dhan.
Gobolku wuxuu kudaray in kabadan 600 oo kiis oo cusub halka 18 kale lagu daray Gobolka Woodbury.